Hoyga > Wararka > Warka Warshadaha > Isbedelada taariikhiga ah ee hagida gawaarida
Caan ka noqoshada gawaarida gaarka loo leeyahay iyo kororka hababka socdaalka sida safarrada isdabamarinta, baarayayaasha gawaarida ayaa caan ku noqday milkiilayaasha gawaarida, waxayna xitaa noqdeen "hub" lagama maarmaan u ah dadka qaar inay safraan. Dad badan oo milkiileyaal baabuur ah waxay dareemaan inay aamin tahay in lala safro, qaasatan markay safar dheer socdaan. Gaar ahaan hadda, maaddaama Internetka Baabuurta loo adeegsado aad iyo aad nolosheena, marinku wuxuu noqday mid ku habboon oo daryeel leh.
Tani maahan oo kaliya inaad ogaato halkaad aadeyso, laakiin waxay kuu sheegeysaa halka aad aadeyso markaad maqantahay, iyo waxa ay tahay inaad ogaato, sida inaad xawaareynayso iyo in kale, waxay kuu sheegi doontaa waqtigeeda inaad gaabin doontid si aad u hubiso tooda Amaan noqo oo ka fogow ku tumashada sharciyada taraafikada isla waqtigaas.
Waa maxay isbeddelada taariikhiga ah ee ka dhacay horumarinta nidaamyada gawaarida gawaarida illaa iyo hadda? Taxanaha yar ee soosocda ayaa lagula wadaagi doonaa adiga oo ku saleysan waqtiga.
Laga soo bilaabo khariidadda wareejinta ee 1921 illaa hagidda gawaarida iswada ee Shiinaha maanta, horumarinta nidaamyada macluumaadka macluumaadka ayaa ardayda ka qaaday ku dhowaad qarni.
Xaqiiqdii, bilowga gawaarida gawaarida, marin habaabintu waxay ku saleysan tahay khariidada.
Dadku waxay ogaadeen in khariidadda oo lagu rogo curcurka uusan u fiicnayn sidii loogu shubi lahaa shaashadda. Sidaa darteed, Daly wuxuu sii daayay nidaam hagitaan ah oo loo yaqaan "Iter-Auto", kaas oo lagu dhex dari karo dashboardka gaariga si loo sameeyo khariidad rogaysa. Nidaamka sidoo kale waxaa lagu qalabeeyaa khadadka isku xidhka baabuurta si toos ah loogu muujiyo khariidada deegaanka inta la wado.
Tani waa sanad ay ka buuxdo muhiimad taariikhi ah. Mareykanku wuxuu si guul leh u bilaabay nidaamkii ugu horreeyay ee dayax-gacmeedka wareegga hawada ee adduunka, oo loogu magac daray "Transit 1B". Sannadaha soo socda, dayax gacmeedyo kale oo gaadiid ayaa soo muuqday midba midka kale.
Nidaamkan waxaa la adeegsaday 1964. Qoraalka qorraxda waxaa loo adeegsadaa in lagu helo astaamaha raadiyaha isla markaana lagu bixiyo taageerada hagidda ee maraakiibta badda hoostooda maraakiibta 'Apple Navy'. Waxay ka caawin kartaa dayax gacmeedku inuu go'aamiyo halka uu hadda marayo, isagoo ku tiirsan dayax gacmeedyada ka sareeya dayax gacmeedka, laakiin tirada dayax gacmeedyada wakhtigaas, astaamaha badanaa way baaba'aan.
Sannadkaas, Xafiiska Cilmi-baarista Guud ee Qaranka wuxuu u raray nidaamka macluumaadka hagidda gaariga, wuxuuna u sameeyay nidaam maareynta kaalmada hagista ee ardayda aan ku tiirsaneyn dayax gacmeedyada Shiinaha, oo loo yaqaan "DAIR".
Qalabka noocan ah ee xambaara wuxuu leeyahay xarun maareynta adeegga ganacsiga u gaar ah wuxuuna bixiyaa laba kanaal tiknoolajiyada isgaarsiinta. Waxaa lagu cusbooneysiin karaa astaamaha raadiyaha ee ku tiirsan nalalka tilmaamaha wadada dhinaceeda si loo helo aqoon ku saabsan isku xirka gaadiidka Shiinaha. Magnetyada ku dhegan wadada waxay "dhaqaajin karaan" ogeysiisyada codka ee ku saabsan bixitaanka xiga iyo xadka xawaaraha horumarka ee hadda jira. Wadayaashu waxay dooran karaan inay ku tiirsanaadaan inta badan saldhigyada hagidda marinnada dhow si ay u helaan macluumaadka xogta hagista. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale u baahan doonaan kaar feer si ay ugu ekaadaan leeb jihada ah (bidix, midig ama toosan), taas oo si wax ku ool ah uga caawinaysa darawalka inuu si habsami leh u shaqeeyo si uu u gaaro halka loo socdo.
Xafiiska Cilmibaarista Badda ee Mareykanka ayaa soo saaray dayax gacmeedka NTS-2, kaasoo wadada u xaaraya imaatinka NAVSTAR GPS.
Gaadhigii ugu horreeyay ee iswada ee hagida adduunka ayaa dhashay.
Gaar ahaan, waxay isticmaashaa qalabka loo yaqaan 'helium gyroscope' si loo ogaado dhaqdhaqaaqa wareega ee gaariga, halkii laga heli lahaa aaladda boostada Mareykanka ee aaladda dayax gacmeedka. Isla mar ahaantaana, qalab gaar ah oo loo yaqaan 'servo gear' ayaa lagu rakibay guryaha gearbox si ay u bixiso jawaab celin si ay uga caawiso joogtaynta booska iyo xawaaraha gaariga, taasoo u suurta gelineysa gaariga inuu muujiyo booskiisa khariidad go'an
Etak waxaa aasaasay Horney waxayna leedahay nidaam marin oo leh khariidad muujinaysa khariidada gawaarida oo si otomaatig ah u wareegeysa markii uu gaariga rogrogo, taasoo u oggolaaneysa halka loo socdo inay ka muuqato dusha khariidada. Waqtigaas, keydka weyn ee shirkadda ayaa soo jiitay dad badan.
Ilaa xad, dayax gacmeedyada GPS-ka ayaa kaliya la fasaxay 1980-yadii. Si kastaba ha noqotee, qiyaastii 2000, dowladda Mareykanka ayaa ugu dambeyntii joojisay xaddidaadda isticmaalka xulashada GPS waxayna u furtay xogta meeleynta saxda ah ee caalamiga ah dadka rayidka ah iyo kuwa ganacsiga ka isticmaala adduunka oo dhan.
Iyada oo horumarka joogtada ah iyo kordhinta shaqooyinka nidaamka taleefannada casriga ee China Mobile, shirkadaha sida TomTom ay go'aansan karaan inay horumariyaan ayna adeegsadaan codsiyada tikniyoolajiyadda moobiilka. Marka shirkaddu waxay bilawday badmaax loogu talagalay PDAs, waxayna habaysay saldhig iyo qalab qaata GPS si ay uga caawiso ardayda inay helaan goobta.
Nidaamka gawaarida gawaarida ayaa horumariyay illaa xad, iyo muujinta madaxa ayaa si dabiici ah u noqotay berrinka cusub ee xiga ee lagu xaqiijinayo horumarinta suuqa tikniyoolajiyadda hagista. Marka Pioneer wuxuu bilaabay nidaamkiisa NavGate. Nidaamkan softiweer waxaa loogu talagalay inuu ku siiyo shirkadaha shahaado gaar ah oo saameyn ku leh adeegsiga hagidda xaqiiqda dhabta ah ee bulshada. Shaashad weyn oo tarjumaysa tarjumaadda ayaa lagu rakibay booska gabbal-dhigga gaariga si loo qorsheeyo aragtida wadaha. Sawirka dusha sare ah
Horumarka degdega ah ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda, hal-badhan hagitaan, jihada codka la xakameeyo, isku xirka gawaarida iyo iswaafajinta taleefanka gacanta ayaa ah jihooyinka horumarka ee gawaarida gawaarida mustaqbalka.
Xiga:Hordhaca shaqada duubista gaariga wadida